के हो दीर्घायु जीवनको रहस्य ? - inaruwaonline.com
मंगलबार, फाल्गुण १८, २०७७
के हो दीर्घायु जीवनको रहस्य ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १४, २०७३ समय: १४:२९:३०
सन् १४८३ मा जन्मिएका थोमस पर सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेर बाँचेका व्यक्ति मानिन्छन् । उनी १ सय ५२ वर्षसम्म बाँचे । उनले बेलायतका १० वटा राजा-महारानी देखे । महारानी एलिजावेथ प्रथमको ५० वर्षको शासन भोगे । सन् १६३५ मा राजा चाल्र्स प्रथमले उनलाई दरबारमा निम्त्याए र उनी यति लामो समयसम्म बाँच्नुको रहस्य सोधे । परले उत्तर दिए, उनी किसानको रुपमा निकै सरल जीवन बिताउँछन्, बढीजसो आलु, फलफूल, जौं खान्छन् ।
उनलाई त्यसरात दरबारमा राजसी सम्मानका साथ मीठा मीठा परिकारहरु खुवाइयो । दुर्भाग्यवश त्यसैरात उनी बिरामी परे र उनको निधन भयो । निधन हुँदा उनी १ सय ५२ वर्ष ९ महिनाका थिए । राजा चाल्र्स निकै दुःखी भए । उनले परलाई सम्मानका साथ वेष्टमिनिष्टर अवेमा समाधिस्थ गर्न लगाए । जुन आज पनि देख्न सकिन्छ ।
बाइबलका अनुसार आदम र इभले फलफुल, बदाम र अनाज खान निर्देशन दिएका थिए । बाइबलमा भनिएको छ, ‘तिमीले खेतमा उमारिएका तरकारी खानुपर्छ ।’ तर पछि बाढी आएर खाद्य स्रोतमै समस्या हुँदा भगवानले मासु खाने स्वीकृति दिएको कथन छ । त्यतिखेर मासु आवश्यक भएपनि त्यसले मानिसको दीर्घायुलाई आश्चर्यजनक रुपले घटायो । बाढी आउनुपूर्व फलफूल तथा अनाज खाँदा मानिसको उमेर ९ सय वर्षसम्मको भएको क्रिश्चियन धर्मग्रन्थहरुमा मिथक पाइन्छ । तर मासु खान थालेपछि त्यो उमेर घटेर ६ सय वर्ष भयो । नौ पुस्तापछि त १ सय ७५ मात्र भयो ।
हिन्दु धर्मावलम्बीबीच पनि विभिन्न व्यक्तिहरु लामो समयसम्म बाँचेको मिथक पाइन्छ । महाभारतका पात्र भीष्म ३ सय ७० वर्षसम्म बाँचेको मिथक छ । यस्तै, देवराहा बाबा ७ सय ५० वर्ष, त्रैलांगा स्वामी २ सय ८०, लोकनाथ ब्रम्हचारी १ सय ६० वर्ष र शिवपुरी बाबा १ सय ३७ वर्ष बाँचेको बताइन्छ । बिभिन्न अनलाइनहरूबाट
इनरुवामा साबित्री गोपालको स्रष्टा सम्मान
इनरुवामा साबित्री गोपाल स्मृति ट्रष्टले स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।ट्रष्टले सखुवागाछीमा कबि गोष्ठी, सांग...
एउटा यस्तो तरकारी जस्को मुल्य प्रतिकिलो १ लाख ३८ हजार
हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने तरकारीको मूल्य जति नै महंगो भए पनि प्रतिकिलो १ हजार रुपैयाँ भन्दा तल नै छ । तर, संसारमा ...
हुलाकी पत्रकारीता देखि हत्केलाको पत्रकारीता सम्म (भिडियो)
हुलाकी पत्रकारीता देखि हत्केलाको पत्रकारीता सम्म (भिडियो) अन्तर्वारता भिडियोकालागि तलक्लिक गर्नुहोसः
दुनियाँकै पढन्ते व्यक्ति जसले ४२ वटा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरे २० वटा डिग्री
विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेर डिग्री हालिस गर्नु वास्तवमा सबैका लागि सजिलो कुरा होइन, निकै मेहेनत गर्नुपर्दछ । एउटा कुन...
‘सुनसरी इनरुवा’ म्युजिक भिडियो निर्माण सुरु
त्रिपुरेश्वर शिव मन्दिरको साधारण सभा
जनक स्मृतिमा बाल मनोविज्ञान शिक्षा
सुर्यकिरण एकेडेमीका अभिभावकलाई परामर्श कक्षा
दमार्टरका अभिभावकलाई बाल मनोविज्ञान परामर्श